Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Gävleborgs län / Hudiksvall
Hudiksvall waxeey ku ag taal jidka E4 80 km waxeey dhanka koofureed kaga taal Sundsvall, waxeeyna 130 km dhinaca waqooyi kaga taal Gävle. Halkaan waxaad kula kulmeeysaa dad qalbi furan, waxaa kaloo meeshaan yaal nolol dhaqameed xayi ah iyadoo la arkayo waxyaabo ka yimid waqtiyadii hore oo ku dhex milyay waxyaabaha casrigaan la joogo
4,524 kiilomitir oo laba jibaaran
Söderhamn 55 kiilomitir
Sundsvall 84 kiilomitir
Hudiksvall waxeey goob farasmagaalaa u tahay degmada Hudiksvall laakiin waxaa jira xaafado kaloo sida Iggesund, Delsbo Forsa iyo kuwo kale. Xaafadaha isku dhowdhowna waxaad ka heleysaa dukaamo, bangiyo, rugag caafimaad, dhakhtarka ilkaha iyo waxyaabo la halmaala. Hudiksvall waa magaalo xeebed qurux badan waxaana la aasaasay 1582. Ilaha dhaqaale ee magaalada waxeey kala ahaayen kaluumeysi, badmaaxnimo, farshaxan iyo ganacsi. Ka ganacsiga kaluunka waxuu sanado badan gudahood ahaay meel uu dakhli muhiim ah kasoo galo. Meelaha kaluunka lagu iibiyo ama meelaha ka agdhow balliyada waxaad ku arkeeysaa wixii kasoo haray waqtigaas.
Degmada Hudiksvall waxey leedahay nolol jaaliyadeed qani ah. Jaaliyada waxeey kuu hayaan fursado kala duwan oo aad ku sameyn kartid waxyaabo kala duwan. Ma rabtaa in talo lagaa siiyo waxa aad sameyn kartid mark aad fasaxa tahay? Baraaktiik? Shaqada waqtiyada fasaxa? ma u baahan tahay caawimaad? Faafaahin dheeraada ka akhriso degmada boggeeda internetka ah.
Dukaamada waxaad ka heleysaa bartamaha magaalada. Shoob senteruumka Guldsmeden ama suuqa Fyren. Waxaad booqataa Centrumhandel si aad u heshid warbixin ku saabsan dukaamada ku yaal Hudiksvall. Dadka ka hela waxyaabaha qarniga ah ha booqdaano dukaan66.
La xiriir xafiiska warbixinta dalxiiska ee Hudiksvall ama booqo bogaga internetka ee Hälsinglands matxafka, Hälsingslands iyo Glysisvallen AB si aad u heshid warbixin dheeraad ah oo ku saabsan waxyaabaha aad sameyn kartid.
Maktabad Soo arag oo samee Xafiiska warbixinta dalxiiska ee Hudiksval Hälsinglands matxafka Hälsingland Glysisvallen AB
Iskoollada waxeey leeyihiin jawi waxa lagu garto eey tahay isku qalbi furnaan iyo is dhexgal waxeeyna kuu hayaan waxbarasho kala duwan takhasusyo kala duwanna leh.
Bromangymnasiet waxuu kuu hayaa 14 barnaamijyo dugsiga sare ah kuwaasoo 9 kamid ah yihiin kuwo aad ugu sii gudbi karto machad xirfadeedyo halka 6 kalana eey kuu diyaarinayaan waxbarasho jaamacadeed. Barnaamijyada laga barto kaamacada waxaad ka heleysaa halkaan.
degmada waxeey kalo leedahay dugsiga sare ee Glada Hudik-gymnasiet iyo dugsi hoose dhexe oo ah kuwa gaarka loo leeyahay.
Waxbarashada dadka waweyn ee Hudiksvall waxeey kuu heysaa waxbarashada lärvux, waa xarun barid iyo horumarineed- Cul, machad xirfadeed iyo sfi (luqada iswiidhishka ee ajnabiga).
Gobolku waxuu wadaa machadka dadka waaweyn ee degmada, machadka dadka waaweyn ee Forsa kuna ayaala Forsa.
Waxbarashada dadka waaweyn Waxbarashada dadka waaweyn Iswiidhiska soo galooytiga Dugsiga dadka waaweyn
Dhowr ah ruggo caafimaad ayaa ku yaala degmada xaafadaheeda kala duwan ee Hudiksvall, Iggesund och Delsbo. Kuwaas waxaa socodsiiya maamulka gobolka laakiin waxaa jira xitaa daryeel bixiyayaal baraayfad ah. Degmada waxaa ku yaal mid ka mid ah labada isbidaallada degdega ah ee ku yaal gobolka waxayna leeyihiin mid ka mid ah qaybaha raajada ee ugu casriyaysan Iswiidhan.
Daryeelka ilkaha dhanka maamulka gobolka iyo dhakhtarada ilkaha ee baraayfadka ah waxaa laga helaa dhowr meelood oo ah gudaha degmadan.
Dhanka Gobolka Gävleborg bogeeda intarnatka waxaad ka heleysaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan Rugaga caafimaadka, Isbitaallada, Dhakhtarka ilkaha iyo Farmasiyada.
Region Gävleborg Hel macluumaadka xiriirka iyo wakhtiyada furitaanka ee rugaha caafimaadka oo ku qoran Hagida daryeelka 1177 Vårdguiden. Akhri dheeraad ku saabsan dhakhtarka ilkaha.
BRIS xuquuqda carruurta ee mujtamaca Kufsiga dumarka Kvinnofridslinjen
Tikadada weey u jabanyihiin ardayda.
Degmada ganacsigeeda iyo shirkadaha HNA Hey'adda kobcinta dhaqaalaha Business Sweden Work in Sweden
Shaqooyinka ka banaan gudaha Hudiksvall